China 12000w 20000w fibre laser fanapahana milina mpanamboatra sy mpamatsy |UNIONLASER
Karazana: Mifono milina fanapahana tamin'ny laser fibre mahery
antoka: 3 taona ho an'ny milina, 2 taona ho an'ny loharano laser fibre, afa-tsy ny ampahany mitafy.
1. Ny laser fibre endrika haingana be dia be ampiasaina amin'ny indostria.Noho ny loharano laser 20kW, dia mety amin'ny fanapahana hazo fisaka amin'ny hatevin'ny hatramin'ny 70 mm.Ny vahaolana maoderina ampiasaina dia ahafahana mamonjy fotoana be dia be ary mampitombo ny fahombiazany sy ny fahombiazan'ny asa.
2. Fitrandrahana setroka mizarazara.Ny milina dia manana ny fonony voahidy, izay mahatonga ny setroka sy ny vovoka ao anatiny.Ny adsorption mahery dia manadio tsara ny rivotra, miaro ny family amin'ny loto.
3. Fibre laser 20 kW IPG.IPG YLS-CUT andian-dahatsoratra mahery tamin'ny laser loharano, ny hatevin'ny Stainless vy, aluminium sy ny fitaovana hafa dia mety hahatratra 70mm.
MODELY UL-3015F H Series
Laser Power 20kw
Karazana laser Loharano laser fibre Raycus (IPG ho an'ny safidy)
Hafainganam-pandeha ambony indrindra 80m/min, Acc=1.2G
Chain System Marika Igus natao tany Alemaina
Rafitra mitondra fiara Japoney YASKAWA Servo maotera misy reducer
Fomba fampangatsiahana Water Chiller sy rafitra fiarovana
Latabatra miasa Fifanakalozana latabatra
Fiovana Electro-optical avo lenta
Ny halavan'ny fibre Output namboarina
Afovoany halavan'ny onjam: (nm): 1080±5
Frequency modulation ambony indrindra: (kHz): 2
Raytools autofocus fanapahana lohanyTsy misy fanitsiana fifantohana amin'ny tanana.Ny isan-karazany ny fitsipika -10mm - + 10 mm, mazava tsara ny 0.01 mm dia ilaina amin'ny fitaovana amin'ny hatevin'ny samy hafa (0-20 mm).
Gantry vita amin'ny aluminium annealed fiaramanidina
Ny fananganana ny gantry dia vita amin'ny aluminium annealed fiaramanidina, miforona amin'ny tanjaky ny 4300 taonina, mahatratra tsy nisy toy izany henjana.Ny aluminium fiaramanidina dia manana tombony maro: henjana avo (avo kokoa noho ny vy), kely faobe, fanoherana ny harafesina sy ny oxidation ary koa ny mora ny machining.
1 Indostria haingoNoho ny hafainganam-pandeha avo sy malefaka fanapahana ny fibre tamin'ny laser fanapahana milina, maro be pitsiny sary azo karakaraina haingana tamin'ny laser fibre fanapahana rafitra sy ny fanapahana vokatra nahazo ny fankasitrahana ny orinasa haingon-trano.Rehefa nandidy famolavolana manokana ny mpanjifa, dia azo tapahina mivantana ireo fitaovana mifandraika aorian'ny nanaovana ny sary CAD, noho izany dia tsy misy olana amin'ny fanamboarana. 2 Indostria fiaraNy ampahany metaly maro amin'ny fiara, toy ny varavaran'ny fiara, ny fantsom-pandehan'ny fiara, ny frein, sns., dia azo karakaraina amin'ny alàlan'ny milina fibre laser metaly.Raha ampitahaina amin'ny fomba fanapahana metaly nentim-paharazana toy ny fanapahana plasma, ny fanapahana tamin'ny laser fibre dia miantoka mazava tsara sy ny fahombiazan'ny asa, izay manatsara ny vokatra sy ny fiarovana ny ampahany amin'ny fiara.
3 Indostrian'ny dokam-barotra 4 Indostria kojakoja
5 Indostria jiro 6 Fikarakarana vy
7 Fitaovana ara-batanaP 8 indostrian'ny fitaovana an-trano
teo aloha: CNC fantsona sy takelaka Laser Cutting Machine
Manaraka: High precision fibre tamin'ny laser fanapahana milina